Sawirro : Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka oo Muqdisho ku kala saxiixday 80$ milyan – AwKutub News
Sawirro : Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka oo Muqdisho ku kala saxiixday 80$ milyan
Leave a Comment on Sawirro : Dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka oo Muqdisho ku kala saxiixday 80$ milyan
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo bangiga Adduunka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday 80 milyan oo dollar oo lagu fulinayo mashaariic horumarineed.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya , Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo agaasimaha Bank-ga adduunka ee bariga Afrika, Bella Bird ayaa heshiiskan saxiixay maanta.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in bangiga Adduunku uu aad usoo dhaweeyay sida dowladda ay uga shaqeeysay hannaanka dayn cafinta kadibna ay go’aansadeen in lagu abaal mariyo $140 Mliyan oo $80 Milyan oo kamid ah guddiga sare ee bank-ga adduunku uu dhawaan ansixiyay.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay dadka Soomaaliyeed sida buuxda ee ay uga qayb qaateen dadaallada dib-u-hagaajinta dhaqaalaha dalka, waxa uuna shaaciyay hadii dadaallada ay dawladdu wado lasii dardar-geliyo in lagu tillaabsanayo horumar intaan ka ballaaran.
Agaasimaha Bank-ga adduunka ee Bariga Afrika, Bella Bird ayaa munaasabadda lagu saxiixay heshiiska ka sheegtay in Bangiga adduunku uu aad u bogaadinayo dawladda Soomaaliya sida ay xil isaga saartay horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka hannaanka dayn cafinta.
Wasiir Bayle ayaa sheegay in heshiiska maanta iyo heshiiskii dhawaan dawladdu la saxiixatay Midowga Yurub in ay muujinayaan dadaalka xoogga badan ee ay dawladdu ay ku doonayso in ay dib ula fal-gasho caalamka.
Tags: Banking Aduunka heshiis Muqdisho Soomaaliya Wararka
Previous Entry Shariif Xasan oo Dacwad ka dhan ah dowladda Federaalka u gudbiyey Wakiilada Qaramada Midoobay & Midowga Afrika
Next Entry Xildhibaannada aqalka sare oo ansixiyey hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha